अनुकूलन विनाइल ब्यानरहरू
भित्री र बाहिरका लागि ठूला ढाँचा ब्यानरहरूको साथ नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्। ठाडो फिर्ता लिन मिल्ने ब्यानर स्ट्यान्डको साथ सजिलो यात्रा गर्नुहोस्।
घर / चिन्ह र पोस्टर / ब्यानरहरू
आउटडोर ब्यानर संकेतहरू
इन्डोर ब्यानर संकेत
फिर्ता योग्य ब्यानर स्ट्यान्ड - प्रीमियम
फिर्ता योग्य ब्यानर स्ट्यान्ड - मानक
चरण र दोहोर्याउनुहोस् ब्यानर + स्ट्यान्ड
X- स्ट्यान्ड ब्यानर (इनडोर)
एक्स ब्यानर स्ट्यान्ड (बाहिरी)
ब्यानरहरूसँग सम्बन्धित रोचक लेखहरू
FAQs - ब्यानरहरू
के म मेरो विनाइल ब्यानरमा रंग्न सक्छु?
हो तपाई सक्नुहुन्छ, तपाईले बिभिन्न पेन्ट प्रकारहरू परीक्षण गर्नु पर्छ तपाईको प्रयोगको लागि उत्तम काम गर्छ भनेर।
तपाईं vinyl ब्यानर रिसायकल गर्न सक्नुहुन्छ?
हो तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई फिर्ता मेल पठाउनुहोस् यदि तपाईं हामीलाई यसको लागि ह्यान्डल गर्न चाहानुहुन्छ भने।
म कसरी मेरो ब्यानर भेला गर्न सक्छु?
x- स्टैंड retractible कदम दोहोर्याउनुहोस्
म कसरी मेरो विनाइल ब्यानर सफा गर्न सक्छु?
तातो तौलिया वा रग र साबुनको ड्यासको साथ। यदि तपाईंसँग 13oz स्क्रिम विनाइल ब्यानर छ भने, तपाईं वास्तवमै यसलाई चोट पुर्‍याउन सक्नुहुन्न।
ब्यानर डिजाइनको लागि तपाईले कति शुल्क लिनुहुन्छ?
यहाँ हाम्रा दुई ब्यानर डिजाइन सेवा मूल्य निर्धारण प्याकेजहरूको लिङ्कहरू छन्। तलका लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्यानर डिजाइन कोटि: डिजाइन सेवा ट्रेड शो ब्यानर डिजाइन कोटि: डिजाइन सेवाहरू तपाईंको अर्को रचनात्मक परियोजना लेआउट गर्न हाम्रो ग्राफिक डिजाइनरहरू भाडामा लिनुहोस्।
मलाई मेरो ब्यानर वा चिन्हमा बोर्डरहरू मनपर्न सक्छ, के यो राम्रो छ?
दुर्भाग्यवश, बोर्डरहरू मुद्रणको लागि नो-नो हो। सीमानाहरू समस्याग्रस्त छन् किनभने सबै सब्सट्रेटहरू प्रत्येक ब्याचको लागि भिन्न हुन्छन्। यसले सटीक काट्ने लगभग असम्भव बनाउँछ। Grand4mat को लागि, यो दृढतापूर्वक सिफारिस गरिएको छ कि तपाइँ तपाइँको डिजाइन मा किनाराहरू थप्नुहुन्न। यदि तपाइँ तिनीहरूलाई समावेश गर्न जिद्दी गर्नुहुन्छ भने, लगभग2इन्च बाक्लो किनाराहरूको लागि जानुहोस्। यद्यपि, ध्यान दिनुहोस् कि यदि तपाइँ पठाउनुहुन्छ ... थप पढ्नुहोस्
ब्लकआउट र जाल ब्यानरहरूको फाइदा र अनुप्रयोगहरू के हुन्?
बाहिरी ब्यानरहरू तत्वहरू विरुद्ध समात्न पर्याप्त बलियो हुनुपर्छ। तिनीहरू पनि ध्यान आकर्षित गर्न पर्याप्त ठूलो र आकर्षक हुनु आवश्यक छ। त्यसोभए, यदि तपाइँ कठोर वातावरणमा लामो समयसम्म एक्सपोजर पछि पनि राम्रो देखिन सक्ने ब्यानर चाहनुहुन्छ भने, तपाइँसँग दुई विकल्पहरू छन्: ब्लकआउट र जाल ब्यानरहरू। ब्लकआउट ब्यानरहरूले दुई-पक्षीय मुद्रण बनाउँदछ ... थप पढ्नुहोस्
वास्तवमा मानक र प्रीमियम retractable ब्यानर बीच के भिन्नता छ?
फिर्ता गर्न मिल्ने ब्यानरहरू ट्रेड शोहरू, सम्मेलनहरू, र इन-स्टोर कार्यक्रमहरूको लागि उपयुक्त छन्, जहाँ तपाईंले ध्यान आकर्षित गर्न, ब्रान्ड जागरूकता निर्माण गर्न, र उत्पादनहरू प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। यी सामान्यतया हल्का, कम्प्याक्ट र सेटअप गर्न सजिलो हुन्छन्। तपाईंसँग छनोट गर्न दुई विकल्पहरू छन्: मानक र प्रिमियम फिर्ता गर्न मिल्ने ब्यानरहरू। मानक फिर्ता लिन योग्य ब्यानरहरू हल्का अझै स्थिर छन्। उनीहरु पनि… थप पढ्नुहोस्
मेरो पाठको आकार कस्तो हुनुपर्दछ यदि म टाढाबाट मेरो ब्यानर वा यार्ड चिन्ह हेर्न चाहन्छु?
तपाईंको पाठको आकार प्रायः दुईवटा कारकहरूमा निर्भर हुनेछ: इच्छित मुद्रण आकार, र तपाईंले पाठ पढ्न योग्य हुन चाहनुभएको दूरी। तलको स्केल र रिजोल्युसन चार्ट हेर्नुहोस्, जुन तपाईंको अनुमानको लागि मार्गदर्शकको रूपमा कार्य गर्दछ:
तपाईं कस्तो प्रकारको ब्यानर सामग्रीमा छाप्नुहुन्छ?
8oz जाल बाहिरी विनाइल: यो एक हल्का विनाइल हो जसले हावाको माध्यमबाट र केही दृश्यताको लागि अनुमति दिन्छ। 10 mil Premium Indoor Vinyl: POP डिस्प्लेहरूका लागि उत्कृष्ट जसले तपाईंको उत्पादन र सेवाहरू छिटो र सहज रूपमा प्रदर्शन गर्दछ। कला गुणस्तर मुद्रण संकल्प। 13 oz Scrim आउटडोर विनाइल: बढेको लागि ब्यानर भर एक थ्रेडेड ग्रिड फिचर गर्दछ ... थप पढ्नुहोस्
के म ठूलो ढाँचा उत्पादनहरु को लागी bleed आवश्यक छ?
यी प्रकारका सामग्रीहरूको लागि, प्रत्येक कुनामा कम्तिमा आधा इन्च असाइन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंसँग 24-इन्च x 18-इन्च प्रिन्ट सामग्री छ भने, तपाईंको फाइल साइज 25 x 19 इन्चमा खडा हुनुपर्छ। यो रक्तस्राव मार्जिन को लागी पर्याप्त हुनुपर्छ। बाहिरी र भित्री ब्यानरहरू र क्यानभास ब्यानरहरू तपाईंले राख्न आवश्यक पर्दैन ... थप पढ्नुहोस्
ग्रम्मेट र पोल जेबहरू के हुन्?
ब्यानरहरू प्राय: माथिल्लो बिन्दुबाट टाँसिन्छन् ताकि यात्रुहरूलाई अझ बढी देख्न सकिन्छ। पोल पकेटहरू र ग्रोमेटहरू जस्ता संलग्नहरू ब्यानरहरूमा थप्न सकिन्छ ताकि तिनीहरू झुण्डिएको बेला सुरक्षित रूपमा राखिएको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। ग्रोमेटहरू ब्यानरको हेममा बाँधिएका साना रिंगहरू हुन् र विभिन्न प्रकारका प्रस्तावहरू… थप पढ्नुहोस्
नरक किन मेरो फाइल यति ठूलो छ?
यदि तपाइँ एक रास्टर आधारित कार्यक्रममा तपाइँको ब्यानर डिजाइन सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै Adobe फोटोशप, तपाईंको फाइल ठूलो हुन गइरहेको छ। तपाईंको डिजाइनमा निर्भर गर्दै यो आवश्यक हुन सक्छ, तथापि, हामी भेक्टर आधारित डिजाइन सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं Adobe इलस्ट्रेटर। जबसम्म तपाईंको डिजाइनले कुनै रास्टर तत्वहरू समावेश गर्दैन, जस्तै ... थप पढ्नुहोस्